သက်ဝေ: အသွင်ပြောင်း ပုံရိပ်
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က ရွှေဒေါင်းတောင် အွန်လိုင်း ဂျာနယ်အတွက် ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပိုစ့် အသစ်တပုဒ်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အရာတခု (သို့) ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ကိုယ်တိုင် ကျေနပ် နှစ်သက်စွာ လက်ခံတတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အသေအချာ နားလည် ခံစားလိုက်ရတဲ့ အခိုက်အတံ့လေးမှာ ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်…။
မြင်ကွင်းထဲမှာ ဝေဝါးနေသေးသော အရာများကို ကြည်လင်ပြတ်သားလာစေရန် မှန်ပြောင်းငယ်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း လှည့်ကာ ချိန်ယူလိုက်မိသည်။ လိုအပ်သော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ရသွားသောအချိန်မှာ ခလုပ်ကို နှိပ်ချလိုက်သည်။ စူးရှသော မီးပွင့်တချက်လင်းလက်သွားပြီး ပုံရိပ်တခုကို အမိအရ ဖမ်းဆုပ်လိုက်နိုင်သည့်အတွက် ကျေနပ်သွားသော အပြုံးကို ပြုံးလိုက်သည်။ ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးလိုက်သော ပုံကို ကင်မရာမှာပါသော ပြန်ကြည့်လို့ရသည့် မှန်ကွက်လေးမှတဆင့် ပြန်ကြည့်ရင်း သဘောတကျ ကျေနပ်နေဆဲ…
ထိုအခိုက်အတံ့လေးမှာပဲ ကိုယ့်ရဲ့ မြင်ကွင်းထဲကို လူတယောက် တည့်တည့်မတ်မတ် ဝင်ရောက်လာခဲ့တာ…။
“ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့ကို ဓါတ်ပုံ တပုံလောက် ရိုက်ပေးနိုင်မလား…”
အပြည့်အစုံကို ဒီနေရာ မှာ ဖတ်ပေးပါနော်...။ ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါတယ်…။
Posted by သက်ဝေ at 10:25 PM
Labels: E Book, ဝတ္ထုတို
Mon Petit Avatar October 9, 2011 at 10:46 PM
ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်သလားဟင် ။ အဆုံးသတ်လေးကို သဘောကြမိတယ်မမရေ။ အခုလို share တဲ့ မမကိုကျေးဇူးပြန်တင်ရမှာပါ။
Nyi Linn Thit October 10, 2011 at 3:13 AM
ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ..၊ ဓါတ်ပုံ ရိုက် တာကို ဝါသနာ ပါတာလေး တခုနဲ့ပဲ ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ တရုန်းရုန်းဆိုပြီး လမ်းခွဲတာကတော့ အတော်ကြောင်တဲ့ အတွေးအခေါ် ပဲဗျ၊ ကင်မရာတွေကိုပဲ ဆက်ပြီး ဖက်တွယ်ထားတာ အဲဒီ မိန်းကလေး မှန်တာပေါ့၊ စကားမစပ် သူက manual focus ပဲ သုံးပုံ ရတယ်နော်...။း)
မေဓာဝီ October 10, 2011 at 4:17 AM
ဖတ်ပီးသွားပြီ အမသက်ဝေ ..
မိန်းကလေးရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သဘောကျတယ်။
ကိုညီလင်းသစ်ပြောသလိုပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ လမ်းခွဲတာကြီးကတော့ မမိုက်ပါဘူး။ ခေတ်နောက်ကျလွန်းတယ်။
rose of sharon October 10, 2011 at 6:54 AM
သွားဖတ်ပြီးပြီအမ... အမရဲ့ အရေးအသား အဖွဲ့အနွဲ့တွေကို အရမ်းကိုနှစ်သက်တယ်...
mstint October 10, 2011 at 9:28 AM
တွေဝေနေမဲ့အစား ပြတ်သားခဲ့တဲ့စိတ်ကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချနိုင်ခဲ့တယ်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ ဇာတ်အိမ်လေး ဖတ်လို့ကောင်းတယ် မသက်ရေ။
sonata-cantata October 10, 2011 at 1:11 PM
ကိုယ့်ရင်ထဲက ပေါ်လာတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မိန်းကလေးကို ထောက်ခံသွားတာပါ...း)
Vista October 10, 2011 at 1:14 PM
ကင်မရာချစ်သူ ဒါ့ပုံချစ်သူအချင်းချင်း အားပေးသွားသည်။
ဟိုလူကြီးကို အဲလိုထားခဲ့တာ မိုက်ဒယ် ဟိဟိ။
မေသိမ့်သိမ့်ကျော် October 11, 2011 at 3:14 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဝတ္ထုတိုလေး။ တကယ်ကို ရင်ကို ထိရှစေတယ်။
Anonymous October 11, 2011 at 5:57 PM
Anonymous October 12, 2011 at 10:58 PM
ဝတ္ထုတိုလေးက လှတယ် သက်ဝေ
နေမကောင်းဘူးလား လို့ စိတ်ပူနေတယ်
Hmoo October 13, 2011 at 1:20 PM
ZZZ October 13, 2011 at 4:29 PM
မသက်ဝေရဲ့ ဘလော့ကိုနေ.တိုင်းလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ မသက်ဝေရေးတဲ့ စတိုင်က မြင့်နေလို. ကျွန်တော့်လို ပေါ့ပေါ့စား၊ပေါ့ပေါ့သွားတဲ့သူက ဘာကိုကွန်မန်.ရေးရမှန်း မသိဖူးဖြစ်နေပါတယ်၊
ချွေးမလောင်း ရှာဖွေရာမှာ မသက်ဝေနဲ. အခန်.မသင့်ပဲ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သွားပေမဲ့ အမြဲတမ်းခင်မင်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
မိုးငွေ့...... October 18, 2011 at 12:04 AM
တစ်ခါတစ်ခါဆိုသလိုပဲ အက်ဆေးတွေက ကောင်းကိုကောင်းနေတော့တာ....။ မိန်းကလေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားပုံလေးကြိုက်တယ်...။
မြသွေးနီ October 19, 2011 at 5:32 PM
ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော၊ အများကိုပါ ထိခိုက်မှုမရှိရင် လုပ်သင့်တယ်။ အစ်မသက်ဝေထုံးစံအတိုင်း ရေးသွားတာလေးက စာဖတ်ရင်းဆွဲခေါ်သွားတာ ခံလိုက်ရတယ်။ အဆုံးသတ်လေးမိုက်တယ်။
မိုးခါး October 21, 2011 at 2:00 PM
မညားရင် စိတ်ထဲမှာ မကောင်းဘူး .. ဟီးး
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဖြည့်တွေးလိုက်တော့မယ်နော် .. :D
ညီမလေး October 25, 2011 at 3:35 PM
ဖတ်ပြီး သနားတာ... ဘယ့်သူ့မှန်းတော့ မသိဘူးး)
ပခုက္ကူ ရေဘေး အလှူ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
ပခုက္ကူ ရေဘေး အလှူခံ